Otu esi emeso algọridim YouTube na-egbochi ọdịnaya gị? - YTpals
Mkpa + Nhazi = ihe ịga nke ọma na YouTube
Ịmekọ ihe na algọridim YouTube siri ike na nke siri ike abụghị otu achicha maka ndị na-ere ahịa. YouTube, nke na-enwe obi ụtọ n'ofe ọrụ 2 ijeri, bụkwa ihe ichoro nke abuo na-egbo mkpa ozi ndị mmadụ, dị ka dijitalụ mgbasawanye na ugbu a. Dị ka nke a, ọ na-enye ikike dị ukwuu iji dọta atụmanya na ịtụgharị ha ka ọ bụrụ ndị ahịa n'ezie. Mana ịkwọ ụgbọala ntinye aka YouTube na mmekọrịta ndị na-ege ntị iji nweta akara ngosi dị elu chọrọ ka ị ghọta nke ọma na YouTube algọridim, nke ụkpụrụ nke nhazi na mkpa na-eduzi.
YouTube nwere iwu ọkwa ọkwa nke ọma nke ọ na-egosi ndị ọrụ ọdịnaya vidiyo dị mkpa yana ahaziri onwe ya n'okpuru ngalaba ise: Ụlọ, Ọchụchọ, Trending, Vidiyo akwadoro, ọkwa na ndenye aha. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhazi ọdịnaya vidiyo gị na algọridim YouTube, ohere gị inwe ihe ịga nke ọma na ikpo okwu ahịa vidiyo nwere ike ịbawanye site na ọtụtụ mpịaji.
Na-ejikọta ọdịnaya na algọridim YouTube
Enweela ọtụtụ ikpe ebe YouTube gbochiri ọdịnaya vidiyo ịpụta na ngalaba ndị a n'ihi na ha adabaghị na algọridim ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi vidiyo gị site na YouTube algọridim, ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole ngwa ngwa ị kwesịrị ịlele.
1. Mepụta ọdịnaya nke na-eme ka njikọ aka
Ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka ịchụpụ njikọ aka YouTube, mana ị nweghị ike izere ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka a hụ gị n'elu ikpo okwu. Algọridim YouTube bụ ihe niile gbasara iwetara ndị mmadụ ọdịnaya bara uru, bara uru na ahaziri iche. O yikarịrị ka ọ ga-enweta ọdịnaya ọ bụla nke na-eme ka ndị na-ege ntị na-emekọrịta ihe na ntinye aka. Ịmepụta ọdịnaya viral na mkpado na mkpụrụokwu dị mkpa nwere ike inyere gị aka ịbawanye ọnụọgụ ntinye aka YouTube gị, na-enye YouTube ihe kpatara iji gosipụta ọdịnaya gị n'ihu ụwa. Ntinye ọdịnaya na-agbakwunye uru na ndụ ndị mmadụ - ihe ọbụna YouTube chọrọ imezu site na algọridim ya. Ọ bụrụ n’itinye aka na imepụta ọdịnaya na-etinye aka na ihe ọmụma, mbọ ịre ahịa vidiyo ga-apụta na nsonaazụ azụmaahịa dị ukwuu.
2. Kwalite ọwa YouTube gị maka visibiliti
Ka ị pụta na nsonaazụ ọchụchọ YouTube, ịkwesịrị igosi algorithm YouTube na ị na-enye ihe ndị mmadụ na-achọ. Ị nwere ike ịkọwa echiche a site na nkọwa ọwa gị na aha vidiyo, nke abụọ bụ akụkụ dị mkpa nke YouTube SEO. Mepụta nkọwa ọwa gị — paragraf ma ọ bụ abụọ – site na itinye mkpụrụokwu akọwapụtara ụlọ ọrụ dị mkpa. Ọzọkwa, aha ọdịnaya vidiyo gị ekwesịghị ịbụ ihe karịrị mkpụrụedemede 50 ruo 60 ma tinye mkpụrụokwu. Nke a ga-enyere aka YouTube algọridim iji soro ọwa gị ma gosipụta ya n'okpuru ụdị dị iche iche. Ka ọwa gị na-ebuwanye ibu, ka ohere ọ ga-esi pụta na nsonaazụ ọchụchọ YouTube ka ukwuu. N'ikpeazụ, ọ nwere ike melite CTR gị nke ukwuu.
3. Nọgide na-enwe usoro nbipute na-agbanwe agbanwe
Eziokwu bụ na algọridim YouTube nwere mmasị maka ọwa ndị na-arụ ọrụ. Ọwa YouTube na-ehi ụra, nke ebisara ọdịnaya na-esoghị usoro, na-adakarị ịrị elu n'elu. Ikpo okwu na-atụle ma ọnụọgụ vidiyo dị na ọwa gị yana oge ikesa tupu igosi ya ndị na-ege ya ntị. Yabụ, isi ihe na-eme ihe na YouTube algọridim na-egbochi ọdịnaya gị bụ imepụta na idobe usoro nbipute. Ime otú ahụ ga-eme ka ị na-ele anya na-agbanwe agbanwe ma mee ka ohere ị ga-aga nke ọma. Soro data nke YouTube Analytics wetara iji bipụta ọdịnaya n'oge ndị na-ege gị ntị na-arụsi ọrụ ike.
Ịkwesịrị iburu ndụmọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'uche mgbe ị na-ebipụta ọdịnaya na YouTube. Ọ dị mma ịmara ihe ndị na-eme ka algọridim YouTube kwụsị ọdịnaya vidiyo. Ọ bụrụ na ị nwere ike ibuli njikọ YouTube na mmekọrịta ndị na-ege ntị site na ọdịnaya gị, ị ga-enweta traction ị chọrọ. Iji nwetakwuo ntinye aka YouTube, ị nwere ike iji ngwa dịka YTPals, nke nwere ike inyere gị aka inweta ndị debanyere aha YouTube n'efu, ihe mmasị YouTube na-akwụghị ụgwọ, na nkọwa YouTube efu.
Otu esi emeso algọridim YouTube na-egbochi ọdịnaya gị? nke ndi edemede YTpals, 14 April 2022
Otu esi enweta YouTube ka ọ kwado vidiyo gị?
Akụkụ "Vidio ndị akwadoro" nke YouTube Ọ bụrụ na ị bụ onye okike YouTube siri ike, mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ ebe dị na ngalaba "Ndụmọdụ maka gị" YouTube. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara na kọlụm nke “Vidio akwadoro”…